Zambia: Misara-kevitra Momba Ilay Fifonana Nataon’i Sata Tamin’i Angola Ny Mpisera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2011 13:07 GMT
Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana an'i Zambia i Michael Sata taorian'ny tamin'ny 20 septambra, ny hetsika diplaomatika nataony volaohany, na ho ratsy na ho tsara, dia ny fandavana ny fanasana nataon'i Bingu Wa Mutharika, filohan'i Malawi, hanatrika ny fihaonana an-tampon'ny Tsena Iombonana aty Afrika Andrefana sy Afrika Atsimo.
Ny hetsika ara-diplaomatika faharoa izay tsy mbola nohamarinin'ny State House (Lapam-panjakana), dia ny fanomezan-dalana nomen'i Michael Sata Radio anankiray tsy nahazo alàlana tany Malawi, ny Joy FM, ary napetraka ao Chipata, tanàna 15Km miala ny sisin-tanin'i Malawi. An'ny zanakalahin'ny filoha tany Malawi taloha, Bakili Muluza, io radio io, ary manam-pikasana handefa ny onjam-peony any Malawi.
Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Image released under Creative Commons (CC BY-SA 3.0) by Wikipedia author Ernmuhl.
Fa ny tena zavatra lehibe nataon'i Sata teo amin'ny hetsika ara-diplaomatika dia ny fifonana nataony tamin'ny fanjakana any Angola noho ny fanapahan-kevitra noraisin'ny antokon'ny fitondrana taloha, MMD, hanohana ireo mpanohitra tany Angola, UNITA sy ny mpitarika azy izay efa maty dia i Dr. Jonas Savimbi. Mampihomehy fa minisitra tsy nanana minisitera tamin'ny andron'ny MMD i Michael Sata, izany hoe raha jerena amin'ny lafiny teknika dia laharana fahatelo izy eo amin'ny ambaratongan'ny fitantanana tao amin'ny filoham-panjakana.
Naneho hevitra tao amin'ny facebook ny Zambiana, Zambian Peoples Pact. Mambo Phiri nilaza fa ny hetsika ara-diplaomatika tahaka itony dia tokony tsy natao ho hitan'ny be sy ny maro raha tena diplaomaty izy:
Nanaiky tokoa i MCS (Michael Sata Tshilufya) fa nihantsy ady i Zambia tamin'ny nanomezany fitaovam-piadiana ireo miaramilan'ny UNITA notarihan'i Jonas Savimbi. O rey olona ô, ireo mpanaraka anjambany fotsiny, misy afaka manazava amin'ny filoha ve fa misy antony ny hetsika ara-diplaomatika ary ny tahaka itony dia tsy fampiseho vahoaka. Efa mahantra isika aty Zambia ka tsy mila fanakorontanana na ady indray satria ny mahampitsoam-ponenana dia tsy mahafinaritra mihitsy
Stan Booga milaza:
Ny fifonana nataon'i Zambia tamin'i Angola tamin'ny nanohanany ny UNITA ve mendrika ny hanaovana fanadihadihana tahaka ny hoe fidiran'i Zambia amin'i Angola tamin'ny namatsiany fitaovam-piadiana? Raha eny, fahadisoana ataon'i MCS koa izay!
Peter Chavula, tsy mandalina firy, mihevitra fa tsara iny fifonana iny. Raha vakiana ny voalaza ao amin'ny soratra navoakany, angamba hoy izy mety hahazo solika amin'ny vidiny mora kokoa amin'i Angola i Zambia noho iny fihetsika iny:
Sata…. tsara be iny nataonao iny
Ny tena lehibe
Tao amin'ny twitter, @munshyamunshya, izay nanompana ny sorany tamin'ny fitsikerana ny fifonana nataon'i Sata tamin'i Angola, nanoratra tao amin'ny twitter:
#Sata tokony hianatra diplaomasia amin'i Malawi. Raha nilaza izy fa tokony hifona aminy i Malawi noho ny sazy politika dia nolavin'i Malawi izany #Sata tokony hianatra ny diplaomasian'i Malawi!
Manontany mikasika ny maha fahatelo an'i Sata tamin'ny ambaratongan-drafitra teo amin'ny fitantanana tamin'ny andron'i Chiluba, @munshyamunshya manontany:
Ary tsy fahatelo moa no nisy an'i Sata tamin'i Chiluba? Raha tsy tiany ny politika nahoana raha nametra-pialana izy? Diso i #Sata !
ah ah tsy azoko mihitsy hoe nahoana isika no hifona amin'i Angola.
Ao amin'ny Zambian Watchdog website (Tranokalan'ny Mpanaramaso Zambiana), no ahitana fanehoan-kevitra samy hafa momba ny fifonana nataon'ny filoha Zambiana.
Don Corleone nahita tombony ara-ekonomika tamin'ilay izy:
Tena zava-dehibe ny fifandraisana ara-EKONOMIKA amin'i Angola… Manana solika ny mpiray vodirindrina amintsika ary mety hahazo tombony amin'izany isika…dingana tsara izay… Mifona amin'ny anaran'ny MMD… Mila mifandray amin'i Angola amin'ny alalan'ny lalamby isika…dingana tsara izay Andriamatoa Filoha…tsy mila mankany Moyen-Orient isika vao mahita solika fa manana maro ny mpiray vodirindrina amintsika..
Mbingu Wakanaka masiaka amin'ny fanakianany ny filoha Sata:
Tsy manana toetra maha filoha azy mihitsy io lahiantitra io. Mampisalasala foana ny zavatra ataony. Indray andro dia nandohalika izy raha nanorokoa pretra iray. Tsy mendrika hitondra firenena ny manana toetra tahaka izany. Ankehitriny indray izy mifona amin'ny anaran'ny Zambiana noho ny heloka natan'izy sy Chiluba tamin'i Angola, kanefa mihevitra fa lavitry ny fanankianana izy. Miharihary izao fa tsy afaka hisolo tena antsika eto an-toerana sy any ivelany izy, satria na dia ny fiteniny aza tsy mendrika ny ho filoham-pirenena izy. Tsy hoe izy akory no tsara indrindra tamin'ireo mpilatsaka hofidiana! Nitady fiovana ny olona ary tsy nahatanteraka ny asany tsara koa i Bwezani. Mbola misy asa sy zavatra mampihomehy miandry antsika sy izao tontolo izao raha izao no mitohy. Andrasantsika ny sarimihetsika manaraka.
Tena andro ratsy tokoa raha filoham-pirenena no hanaovana fanamarihana tahaka izao. Tsy mpanara-dia an'i RB aho fa ataoko kosa fa tokony hisaina amin'ny zavatra teneniny i MCS. Tsy filohan'ny PF izy fa filohan'i Zambia. Tokony hotsaroany fa tsy ao amin'ny antoko mpanohitra instony izy ka tokony hitandro mandrakariva ny tombotsoan'ny firenena aloha vao ny politikany miaraka amin'ny PF .
Voankinan'i Peema mafy koa ny filoha:
Ny fitenenana zavatra tahaka izao dia fanehoana ny tsy fandraisana andraikitra mihitsy. Nitsahatra ny ady tany Angola noho ny ezaka nataon'i FTJ. Tsy nantsoina fahatany hoe “Fifanarahana Fandriampahalemana tany Lusaka” ny fifanarahana natao.
Tsy mahazo na inona na inona izahay raha manankiana ny filoha. Tokony hianatra ny politika hampiharina amin'ny vahiny ity rangahy ity satria izay no manahirana antsika. Misy koa ny vaomiera Angola-Zambia ary tokony ho tany no niresahana ity zavatra ity. Lavitry ny media.
Inona moa no zavatra hitranga raha toa ka lany hitondra ny firenena ny UNITA ato anatin'ny taona vitsy? Mba efa nosaininao ihany ve izany Andriamatoa Filoha? Tianay ny hahombiazana.
Maurice Makalu kosa manana fijery hafa:
Tsy ‘azoko” ny antony ampiasaina “resabe” any amin'ny lohateny. Lazainareo fa tsy misy dikany ny fifonana, avelantsika hijanona amin'izao izany? Tsy fahadisoana izany. Raha kilalao echec izy ity, dia nanetsika vato goavana i Sata hametrahana an'i Zambia hanana tombony ara-barotra amin'i Angola. Faly amin'ny nanaovany iny fihetsika iny ny mponina any Avaratra Andrefana. Ny dingana manaraka izao dia ny firesahana ny fikasana hanao lalana sy lalamby.
Tena tsara iny Andriamatoa Filoha!
7 ora izayNizeria